"Yesigaba sabasebenzi isitshalo" OJSC (Saint Petersburg) - omunye wamaphayona of Russian umshini wokwakha. Le nkampani, manje eyingxenye ye-United shipbuilding Corporation, eyasungulwa ngo-1826. I last eminyakeni engamashumi ayisihlanu, kube ngokukhethekile ukukhiqizwa imishini zasolwandle, futhi ukhiqiza nemishini imboni yezamandla. Le nkampani njalo ekuthuthukiseni ezahlukene imikhiqizo enikeziwe ngokubili yasekhaya futhi emakethe angaphandle.
Kusukela ezinsukwini lokuqala Plant yesigaba sabasebenzi (ngaphambili Alexandrovsky Iron Foundry) wawusebenza njengenduku oda isimo zamasu kanye silwenza imishini ukuze umkhakha eRussia. Kusukela 1826 ukuthi likhiqizwa eziyinkimbinkimbi ubunjiniyela design, ezakhiwe ngowokuqala yasekhaya umusi imikhumbi futhi amakhanda. Phakathi ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, inkampani isidlulile ngokuphelele ukhiqiza ukulungisa imikhiqizo umkhosi:
izitimela armored nezimoto armored;
izingxenye ze-amathangi, izikhali anti-aircraft;
izimayini kanye nezinhlamvu.
ngonyaka 13.09.1963 wafika isinqumo kwesibhamu we Council of Ministers wase-USSR: isitshalo redeveloped - ke waqala ukuveza imikhiqizo engineering zasolwandle. Ngaleso sikhathi, imikhumbi yempi Soviet ngilinqobile izilwandle. Yempi nemikhumbi civil required imishini ngokuyinhloko entsha.
Ukuqinisekisa imishini izinhlelo isimo shipbuilding ifektri yesigaba sabasebenzi waqala ukusebenza ngo-Ministry of the umkhakha shipbuilding. I ibhizinisi idale umklamo ehhovisi ezikhethekile - iminyaka kakade nengxenye abasebenzi ifektri waqala yokukhiqiza imishini zasolwandle. Saqala nge ukuboniswa amamodeli we ephakamisa namadivayisi Ngishoné, emphemeni Cranes kanye eziqondisa amagiya. Kamuva yingcweti ukukhululwa luyalawuleka iphimbo ophephela, imishini wokubacindezela, ezandleni ngoba submersibles, ukudluliswa izakhiwo eziwuketshezi nezimpahla ezomile ukuhambisa olwandle phakathi izitsha.
JSC "ifektri yesigaba sabasebenzi" - ibhizinisi zamasu. Le nkampani inyathelisa ezihlukahlukene zasolwandle kobuchwepheshe obuyinkimbinkimbi, okubandakanya imikhiqizo eyingqayizivele, okuyinto wasebenza kakhulu Russian kanye inani lemikhumbi angaphandle. imikhiqizo yayo ukuhlinzeka oda elalibhekwa njengelikhulu kakhulu ngaleso Navy, athunyelwa kwamanye amazwe ngaphansi ukusekelwa "Rosoboronexport".
Ngo inkhulumomphendvulwano emahhovisi design futhi shipyards ifektri kuhloswe ukudala imikhiqizo yesimanje yokuncintisana yafuna kwasekuqaleni emakethe yasekhaya.
Factory yesigaba sabasebenzi: Izibuyekezo
Ngokombono abalingani kwezomnotho kanye namakhasimende, ngezindlela eziningi ukukhiqizwa esiyingqayizivele ibhizinisi lihlangabezana ezibekiweko kushiwo, futhi izinga okunokwethenjelwa. Ochwepheshe lenkampani izikhathi eziningi wathola isimo futhi yomnyango imiklomelo. Lapha ukusebenzisa izimiso ukuphathwa yesimanje, kuba sesimanje esihleliwe izinqubo zobuchwepheshe.
Umphumela okunengqondo: isitshalo yesigaba sabasebenzi ukhiqiza imikhiqizo ukuncintisana kanye ehilelekile nekusetjentiswa kwetinhlelo isimo eRussia, isibonelo, kule Target Federal Uhlelo "Development of Civil Marine Technology" ngoba isikhathi iminyaka 2009-2016 e uhlelo yezikhali isimo 2011-2020.
Omunye izikhungo ezinkulu kakhulu kuyisayensi nakwezezimboni yezwe iyona Northern dolobha - edolobheni Petersburg. isitshalo yesigaba sabasebenzi kunomthelela umnikelo wayo ubalulekile ukuthuthukiswa esifundeni. Hlala ethandwa inkampani emakethe umhlanganyeli ivumela eziningi eziwusizo. Lokhu ukutholakala ucwaningo, zokuhlola kanye zobuchwepheshe base zezimboni, ukuze sihlinzeke izinhlelo eziyinkimbinkimbi futhi, yebo, ukugxila sesimanje ukukhiqizwa futhi isingeniso ubuchwepheshe nezimfuneko yesikhathi.
Ikhishwa JSC "yesigaba sabasebenzi isitshalo" izitsha eyinkimbinkimbi imiklamo. Lokhu emphemeni electrohydraulic futhi phezulu Cranes kagesi, stabilizers anhlobonhlobo imishini ekhethekile. Basuke efakwe umkhumbi ngwenya nangomcibisholo, izindiza yenethiwekhi, civil, kwafika imikhumbi.
Eminyakeni yamuva, izimpahla ukuthekelisa aerobatsplanes kits zadalwa ngenxa othwala izindiza "Vikramaditya" Indian Navy, okuyinto kwenziwa ukulungiswa kwi "Sevmash". Lena mkhiqizo esiyingqayizivele eRussia kuphela ifektri yesigaba sabasebenzi.
lobuchwepheshe kabusha imishini
Khulisa ukukhiqiza - lena umsebenzi oyinhloko abaphathi. Okungenani ubhavu umgomo ukunikeza amakhasimende, kuhlanganise uhola Navy Russian Armed Forces, imikhiqizo ngo bawuhloniphe nezimfuneko nezivumelwano.
Qhubeka ukuhlinzeka isitshalo yesimanje ukucutshungulwa izikhungo, umbuzo kuhlomisa emsebenzini kufanele kube amazwe cutting amathuluzi kanye tooling. Ngaphezu retooling ehlelekile kanye sesimanje, isitshalo yesigaba sabasebenzi otshala imali ukuthuthukisa oludidiyelwe Imininingwane nokwenziwa ngcono umculu ukuphathwa izinhlaba.
kabusha umnyango zokukhiqiza ukuthi esephumelele ukufeza ukuze akhiqize emakamu eliphakeme zezinto eziphilayo kanye ngcono ukuphathwa kahle. nokubambisana Thuthukisa amakhono abasebenzi, ukuthuthukisa abasebenzi ugqozi ohlelweni, umkhuba yandile namanyuvesi olufanele ukuheha nezifundiswa abasha futhi abasebenzi. Labelwe abalulekile izimali esabelweni sezimali lobuchwepheshe kabusha kuhlomisa lokutimele ekukhiciteni zasolwandle imishini zobunjiniyela.
ukukhiqizwa imikhiqizo zasolwandle kanye wobunjiniyela zalesi sitshalo uye waba njalo isidingo esitebeleni phesheya. Deck Cranes, umkhumbi imishini amandla, amadivayisi ukudluliswa wezimpahla yokuyidayisela yi isitshalo kwekhulu leminyaka elidlule, asetshenziswa ngempumelelo imikhumbi eminingi, kuhlanganise - ngamazwe.
Ezibalulekile Ezingafundwa abasebenzi kwaba 2013th - ngonyaka beqeda izibopho isethelwe ukufakwa eNdiya amasede amabili imishini ukubopha. Izinhlelo ifektri yesigaba sabasebenzi, ngokusebenzisa ukuqaliswa inkontileka, ukubandakanya oda efanayo inzuzo esikhathini esizayo. Ubani yingcweti ukukhululwa kwe izinguqulo ezintsha igesi abaphehla ugesi, wafuna abalingani angaphandle. Ungene futhi iqaliswe Inkontileka supply eminyakeni 2014-2017 16 amasethi igesi ophephela ugesi GTG 1250-2E ngoba imikhumbi ezine Indian Navy 15B phrojekthi.
Lena yesigaba sabasebenzi isitshalo ndaba kuqinisekisa linokwethenjelwa kanye nekhono ukuthuthukisa izinkomba amasha emkhakheni wobunjiniyela asolwandle.
Uyini musket, ubukhulu, isakhiwo kanye nencazelo yegama elithi
Amafutha sunflower: okuqukethwe kwama-kilojoule, ukusetshenziswa, ukukhiqizwa
Cream izinwele ukususwa: ukubuyekezwa. Uyini ukhilimu kangcono izinwele ukususwa bikini ndawo?
Calcium abamelene - izidakamizwa ezibanzi-spectrum
Bangaki imizuliswano ekushayeni isibhakela? Imithetho eyisisekelo isibhakela lochwepheshe